Wenger oo maanta ka jawaabay wararkii sheegayey in Jose Mourinho uu qorsheystay in uu banaanka hadii uu ku helo wajiga ka bur burinayo…Muxuu ka yiri? – Gool FM
Wenger oo maanta ka jawaabay wararkii sheegayey in Jose Mourinho uu qorsheystay in uu banaanka hadii uu ku helo wajiga ka bur burinayo…Muxuu ka yiri?
(London) 23 sebt 2016. Arsene Wenger waxa uu si qaraaxo leh uga hadlay wararkii sheegayey in Jose Mourinho doonayey in uu wajiga ka bur buriyo.
Hadalan ayaa lagu qoray buuh ka sheekeenaya taariikhda Jose Mourinho uu uu qoray wariye lagu magacaabo Rob Beasley hadana si taxane ah loogu daabaco Sportsmail.
Tababaraha reer Portugal hore waxa uu ku tilmaamay Arsene Wenger “Mid takhasus u leh guul daradda”, wareysi ayaa 2014 sida Rob Beasley loogu sheegay: “Marka Mr Wenger uu dhalleeceeyo CFC ama Man United isaga oo ka hadlaya heshiiskii Mara….Waan heli doonaa maalin isaga oo Kubadda Cagta meel ka baxsan jooga waxaana bur burin doonaa wajigiisa.”
Hadaldan waxa ay sii kicineysaa awalba xiriir meel xun joogay yeelkeede, Wenger waxa uu sheegay in uusan xiiseneyn aqrinta buugaas.
“Ma aqrin buuga, hubaashii ma aqrin doono markaa kama hadli karo. Waxaan ka hadlaa Kubadda Cagta wax ku saabsan taasna waa waxa aan sameeyo gabi’ahaanba,” ayuu Wenger ka yiri arintan kahor kulanka Premier League ee ay Chelsea berri la leeyihiin.
“Kuma jiro jawi wax bur burinaya. Maya waligey. “Waxaan ahay mid wax dhisa kamana hadli kara taas maxaa yeelay waxaan diiradda saarayaa kulanka berry iyo sida aan dooneyso in aan Kubadda Cagta u dhelno.
“Qofna dhibaato shaqsiyadeed lama lihi, waan qadarinayaa qof walba ee dheeshan mana dareemo in aan kooxo badan oo kale ka hadlo. Mararka qaar malaha waxaan sheegayaa waxa aan qabo sida ay ila tahay laakiin taas waa qeyb ka mida sida aa ahay.
“Waxa cajiibka ah ayaa ah in arintan aysan wax saameyn ah ku lahayn kulankeena berry shaqsi ahaanna waxaan diiradda saarayaa sidii aan wax fiican uga sameyn lahaa shaqadeyda iyo qadarinta qof walba.”
Saf isku dhaf ah oo laga sameeyey Arsenal Vs. Chelsea
'Ma nihin Weyne Rooney', Jose Mourinho oo u jawaabay kuwa dhalleeceeya kabtankiisa